knowledge Archives - ခေတ်သစ်နတ်ခ်
အပျော်ရွှင်ဆုံးလို့ သင်မြင်တဲ့စုံတွဲကိုရွေးပါ၊ သင့်အချစ်ရေးကို မှန်အောင်ပြောပြမယ်… ခုပြထားတဲ့ ပုံလေးသုံးပုံမှာ အပျော်ရွှင်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ သင်ထင်တဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲပုံကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ပုံလေးကနေတစ်ဆင့် သင့်ရဲ့အချစ်ရေးကိုပြောပြပေးပါမယ်။ အဖြေတွေကိုတော့ အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါနော် ပံု (၁) ဒီပုံလေးကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ သင့်အချစ်ရေးကတော့ အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ အချစ်မျိုးပါ …။ သင့်ချစ်သူနဲ့ဓာတ်ပုံတွေ၊ သင့်အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Social Media တွေပေါ်မှာ
မိမိအိမ်က ခြင်ရိုက်တံအပျက်တွေကို အလွယ်တကူ ပြုပြင်နည်းလေး ခြင်ရိုက်တံ ပျက်သွားတိုင်း မပစ်ကြပါနဲ့ ပြင်လိုက်ရင် (၂)နှစ်ကနေ (၅) နှစ်အထိ သုံးလို့ရသွားပါတယ် ဆိုတော့ အောက်မှာပဲဆက်ကြည့် ရအောင်ပါ။လုပ်နည်း အဆင့်ဆင့်လေး ပြောပေးထားပါတယ်။ အဆင့်(၁) ၊၊ ။ခြင်ရိုက်တံ ၁၀၀ မှာ ၉၉ ကတော့ ဓာတ်ခဲ မအောင်တာ၊ မကောင်းတာ
အပင်ရဲ့ ပင်ပိုင်းအင်္ဂါတွေဖြစ်တဲ့ ပင်စည်၊ အကိုင်းအခက်၊ အရွက်၊ အမြစ် အစရှိတဲ့ ပင်ပိုင်းအင်္ဂါတွေကို ဖြတ် တောက်ပြီး သင့်တော်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေမှာ စိုက်ပျိုးထားရင် အမြစ်သစ်၊ အညွန့်သစ်တွေ ထွက် ပေါ်လာပါတယ်။ အောက်ပါအရည်အချင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ အပင်တွေကို မျိုးပွားနိုင်ပါတယ်။မျိုးရိုးသိတဲ့ အပင်ဖြစ်ရပါမယ်။ (အသီး၊ အပွင့်၊ အရည်အသွေးကောင်းမှု၊ ရောဂါပိုးမွှားဒဏ်ခံနိုင်ရည် ရှိမှု)၊ အထွက်နှုန်း
လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ စိတ်ထဲမှာ မျှော်လင့်ချက် ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သင်ရွေးလိုက်တဲ့ သစ်ပင်လေးက ပြောပြပေးမယ့် သင့်ရင်ထဲက မျှော်လင့်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကြိုက်ဆုံးသစ်ပင်လေးကိုရွေးပြီး အဖြေကိုကြည့်လိုက်နော်။ (၁) သကြားပင် သင်ဟာ ခံစားလွယ်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အချိန်တော်တော် များများကို သင့်ကို လူတွေဘယ်လို ထင်နေလဲ ဆိုတဲ့အတွေးတွေမှာ အကုန် ခံလေ့ ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်မှာ သင့်ဘဝထဲကို
ဖုန်းယူစစ်တဲ့ အခါ VPN app ကိုချက်ခြင်းရှာမရအောင် ဖွက်ထားချင်တယ် ဆိုရင် VPN App ကို ဘယ်လို ဖွက်မလဲ ဖုန်းယူစစ်တဲ့အခါ VPN app ကိုချက်ခြင်း ရှာမရအောင် ဖွက်ထားချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ကနည်းအတိုင်း လုပ်လို့ရပါတယ်။(VPN App ကို ဘယ်လို ဖွက်မလဲ) 1-
သက်တော် ၁၇ နှစ်နဲ့ ကျမ်း(၅)ကျမ်း နှစ်ချင်းပေါက် အောင်မြင်တော်မူပြီး ဝိနယဝိဒူဘွဲ့ကို ရရှိတော်မူသော ကိုရင်လေးရှင်ရေဝတ သက်တော် ၁၇ နှစ် နဲ့နိကာယ်စာမေးပွဲတွင် ကျမ်း ၅ ကျမ်း နှစ်ခြင်းပေါက် ဖြေဆိုအောင်မြင်တော်မူပြီး ဝိနယဝိဒူဘွဲ့ကို ရရှိတော်မူသော ကိုရင်လေးရှင်ရေဝတ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိ ကျိုက်လတ်ဗုဒ္ဓ တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်း
#ရက်စက်လွန်းနေပြီ ဒီတိုင်းပြည်ခို ဒီရေကိုသောက် ဒီမြေအောက်က ကူထောက် စီးပွား ထုတ်ယူစားပြီး ပြည်ဖွားအိမ်ရှင် ရန်သူထင် အသင်မှားနေပြီ. မျိုးရိုး ဘာသာ သာသနာကို ခြေချနင်းလျက် အတင်းဖျက် ရက်စက်လွန်းနေပြီ . ဓမ္မလိုလား ပြည့်သွေးသားကို ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ် နင်းချေဖျက် တုနှိုင်း ဘယ်ခါမရှိပြီ . သင့်အိမ်ခိုလျက် သင့်ကိုဖျက် သင်လက်ခံမည်လော
NLD ပါတီကို တည်ထောင်ခဲ့သူ စစ်သားအိုကြီးတစ်ဦး နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စစ်သားအိုကြီးလို့ကျွန်နော်သုံးနှုန်းထားတဲ့သူကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးရွေးကောက်ခံ သမ္မတကြီး ဦးထင်ကျော် ရဲ့ဇနီး ဒေါ်စုစုလွင်ရဲ့ဖခင်ကြီး ဦးလွင် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဦးလွင် ဟာ NLDကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့အမာခံ လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးလွင်ဟာဆယ်တန်းဖြေပြီးနောက် အိမ်မှထွက်ပြေးကာ တပ်မတော်ထဲဝင်ရောက်ပြီး ဒုတိယကမ္ဘာ စစ်ကြီးအတွင်းမှာ ရီကူဂွန် ရှိကန်ဂက်ကို မှာစစ်သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီး
တောတောင်တွေထဲ မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့လျင် အသုံးတည့်စေရန် အနာကျက်တဲ့ငှက်ပျောစေး ငှက်ပျောစေး အသုံးဝင်ပုံ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ငုတ်ထိုး ခြေချော် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကာ သွေးထွက်သံယိုအနာတရဖြစ်တတ်ကြသည်က လူတိုင်းသဘာဝပင်ဖြစ်ပါ၏။ အချို့သောဒဏ်ရာ အနာတရဖြစ်ပါလျှင် ရုတ်တရပ်ဘာလုပ်ရမည်မသိ အခက်တွေ့တတ်ကြပါ၏ ဆေးလည်းမသိ ဆေးလည်းမရှိ ဆေးရုံဆေးခန်းတို့ဖြင့်ဝေးကွာပါလျှင် ငှက်ပျောပင်ကို သတိရကြပါ။ ငှက်ပျောပင်ကို ခုတ်လိုက်ပါ အစေးများ ထွက်လာပါမည်။ထိုအစေးဖြင့် ဒဏ်ရာကို သုတ်လိမ်းပြီး